How to Automatically Share Your WordPress Posts to LinkedIn Using Zapier | Martech Zone
Etu ị ga - esi kekọrịta Ọrụ WordPress gị na LinkedIn na iji Zapier
Tọzdee, Febụwarị 18, 2021 Tọzdee, Febụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Otu n'ime ngwaọrụ kachasị amasị m maka ịtụ ma bipụta ndepụta RSS ma ọ bụ pọdkastị m na mgbasa ozi mmekọrịta bụ FeedPress. Na nwute, ikpo okwu enweghị njikọ LinkedIn, agbanyeghị. Agara m lee ma ọ bụrụ na ha ga-agbakwunye ya ma ha nyere azịza ọzọ - na-ebipụta na LinkedIn site na Zapier.
Zapier nweere onwe ya maka obere njikọta na otu narị ihe, n'ihi ya enwere m ike iji ngwọta a na-enweghị ego ọ bụla na ya… ọbụlagodi! Nke a bụ otu esi amalite:
Tinye onye ọrụ WordPress - Aga m akwado ịgbakwunye onye ọrụ na WordPress maka Zapier na ịtọlite ​​otu okwuntughe. Zọ a, ị gaghị echegbu onwe gị maka ịgbanwee paswọọdụ gị.
Wụnye Zapier WordPress Plugin - The Zapier WordPress ngwa mgbakwunye na-enye gị ohere iwekota ọdịnaya gị WordPress na tọn ọrụ dị iche iche. Tinye aha njirimara na paswọọdụ nke ịtọọrọ Zapier.
Tinye WordPress na LinkedIn Zap - The Okechukwu LinkedIn Peeji nwere otutu ihe edeputara ugbua… otu n'ime ha bu WordPress na Linkedin.
Zapier WordPress na Template LinkedIn
Banye na LinkedIn - a ga-ajụ gị ka ịbanye na LinkedIn wee nye ikikere maka njikọta. Ozugbo ịmechara, ejikọtara Zap.
Tụgharịa na Zap gị - Kwado Zap gị na oge ọzọ ị bipụtara post na WordPress, a ga-ekekọrịta ya na Linkedin! You'll ga-ahụzi Zap ka ọ na-arụ ọrụ na dashboard Zapier gị.
Ma lee ebe ị na-aga! Ugbu a, mgbe ị bipụtara post gị na WordPress, a ga-ebipụta ya na LinkedIn na-akpaghị aka.
Oh… ma ugbu a, m na-ebipụta ebe ahụ, ikekwe ị ga-achọ iso m na LinkedIn!
soro Douglas Karr na LinkedIn
Tags: ndepụta na njikọLinkedInnjikọ jikọtaraebipụta wordpress na linkedinrss ka njikọmgbasa ozi mgbasa oziWordPresswordpress pluginwordpress na linkedinwordPress to linkedin zapikezapier wordpress ngwa mgbakwunye
Crowdfire: Choputa, Curate, Ekekọrịta, na Bipụta ọdịnaya gị maka Social Media